Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ekipa mpitarika vaovao nambaran'ny Aprecia
Kyle Smith dia voatendry ho filoha sy lehiben'ny mpitantana ny Aprecia Pharmaceuticals, LLC, mahomby avy hatrany. Atoa Smith dia 10 taona efa ela niasana tao amin'ny Aprecia ary efa filoha lefitry ny Operations nandritra ny 3 taona lasa. Amin'ny maha-Filoha sy Lehiben'ny Fampandehanan-draharaha, Andriamatoa Smith dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitarihana ny asa aman-draharaha andavanandro.
Aprrecia dia nanamafy bebe kokoa ny ekipa mpitarika azy tamin'ny alàlan'ny fampiroboroboana an'i Patrick Staudt ho filoha lefitry ny Operations, mahomby avy hatrany. Veteran'ny Aprecia 14 taona, Mr. Staudt dia nitarika ny famokarana East Windsor, NJ nandritra ny 10 taona mahery ary naneho ny talenta sy ny traikefa hitarika ny fitomboana andrasana sy mivelatra amin'ny alàlan'ny sehatra teknolojia marobe.
Ingahy Smith sy Mr. Staudt no vato fehizoron'ny tantaran'i Aprecia momba ny teknolojia sy ny fanavaozana ny famokarana. Izy ireo dia mpandray anjara lehibe amin'ny fametrahana ny orinasa ho mpitarika amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra fanafody amin'ny alàlan'ny 3D-Printing. Ny traikefan'izy ireo niaraka tamin'i Aprecia dia nanampy tamin'ny famoronana ny kolontsain'ny orinasa sy ny fanavaozana ny famokarana fanafody 3DP, ary ny fandraisan'anjaran'izy ireo dia niteraka rivo-piainana izay mitohy mihamitombo amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa manan-danja sy ny vokatra vaovao.
“Rehefa mivelatra ny sehatra teknolojian'i Aprecia ary mandroso ny fiaraha-miasa amin'ny indostria, dia mitaky talenta sy loharano fanampiny i Aprecia mba hahafeno ireo fitakiana mitombo ireo”, hoy i Chris Gilmore, Lehiben'ny Mpanatanteraka an'i Aprecia. "Sambatra izahay manana manam-pahaizana momba ny teknolojia efa za-draharaha sy mpitarika orinasa mba hampiroborobo sy hitarika ny fitomboan'ny fandaminana amin'ny ho avy."
Atoa Kyle Smith dia manana mari-pahaizana Master of Business Administration avy amin'ny Miami University, ary Bachelor of Science in Chemical Engineering avy amin'ny Georgia Institute of Technology.
Atoa Patrick Staudt dia manana mari-pahaizana Bachelor of Science in Biomedical/Medical Engineering avy amin'ny Drexel University.